Hanthar Waddy U Win Tin – Articles | MoeMaKa Burmese News & Media
MoeMaKa Questions for U Win Tin - Daw Suu 65, Friends of NLD &amp; Regime Nuclear Politics
ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း၍ ခေတ်လမ်းကို လျှောက်ခြင်း (၁၀+၁၁+၁၂)
Question for U Win Tin - Towards 2nd Pinlon Conference, Political Force in Solidarity and Burmese Community in Unity
U Win Tin - Differences , Lybia, Burma &amp; Japan
လင်းနွေးအိမ် - “ဗမာပြည်သားတွေရဲ့ ဘဘ”
U Win Tin - NLD for the People, CRPP and Suu's Bagan Trip
မြေကြီးကိစ္စ မေ့လျော့ပေါ့ဆ မလုပ်ကြနဲ့ လှုပ်တတ်တယ်၊ ပြိုတတ်တယ်၊ မျိုတတ်တယ်
မေ ၉၊ ၂၀၁၃
ဒီကနေ့ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ အင်မတန်လေးလံဝန်ပိတဲ့ ကိစ္စကြီးတရပ် ရှိနေတယ်ဗျာ။ နှလုံးသားမှာ ကျောက်တုံးတွဲ ဆွဲထားသလိုပဲလို့တောင် ပြောရမလား မသိဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒီလှိုင်းစာစောင်ရဲ့ အာဘော်ခန်းမှာ “မြေကြီးကိစ္စ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပဲဗျာ။ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စတွေက ပေါင်းလန်ဗြောင်းဆန်အောင် များပြားဆူဝေနေတယ်။ ဘယ်ကိစ္စကို ဘာက ကိုင်ပြောရမှန်း မသိတတ်အောင် ဖြစ်နေရတယ်။ ဒီလှိုင်းက အဲဒါတွေအားလုံးကို မြေကြီးကိစ္စလို့ တံဆိပ်ကပ်လိုက်တယ်ဗျို့။
ဟုတ်လိုက်တာဗျာ။ ကျုပ်ပြောချင်နေတာကလည်း တစ်ပြည်လုံးရဲ့မြေတွေ ယာတွေရဲ့ကိစ္စ၊ မြေတွေ ယာတွေပေါ်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ လယ်သမား ယာသမား၊ မြေလုပ်သားတွေရဲ့ ကိစ္စ၊ အဲဒီလုပ်သားထုကြီးရဲ့ ငွေကြေး အရင်းအနှီး မပြည့်စုံမှုကိစ္စ၊ ကြွေးမြီကိစ္စ၊ ချေးငွေကိစ္စ၊ စိုက်ထုတ်ရင်းနှီး သုံးစွဲနေရတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး စရိတ်ငွေကြေးတွေရဲ့ ကိစ္စ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံ ဈေးနှုန်းတွေရဲ့ ကိစ္စ။ အို . . . ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင်ပါပဲဗျာ။ စားရင်းတို့ရင် အပင်းဆို့သလို မော မော မော ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲပေါ့။
ဒီအထဲ စစ်တပ်တို့၊ အစိုးရဌာနတို့ ခရိုနီ၊ ခရိုပြာ၊ ခရိုဝါ၊ ခရိုစိမ်းဆိုတဲ့ အာဏာကပ်ပါးတို့က မတော်မတရား နည်းမျိုးစုံနဲ့ သိမ်းယူအပိုင်စီးထားတဲ့ မြေယာဧက သိန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ကိစ္စကလည်းပါသေး။ သီးနှံစိုက် လယ်ယာမြေတွေပေါ်မှာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ အိုးမြေ အိမ်မြေ၊ တပ်မြေ စခန်းမြေ၊ သတ္တုတူး ကျော်ဖော်စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင် မတရားကြီး သိမ်းထားတဲ့မြေတွေက အများကြီး အားကြီးရှိသေးသဗျ။ အဲဂလို သိမ်းထားတဲ့ မြေတွေ၊ ယာတွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေက လယ်ယာမြေစိုက်ခင်းတွေကလည်း ဧရာမ အများကြီး ပါဝင်နေသေးတယ်လို့ ဆိုသဗျ။
ထားပါတော့ဗျာ။ အဲဒီမြေကြီး ကိစ္စကြီးတွေက ဒီနေ့ ပူလောင်ဆူပွတ် ဂယက်ထလာနေပြီဗျ။
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းဆိုတာ အားလုံးသိကြပါရဲ့။ မီးခဲကိစ္စကြီးလေဗျာ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာနယ်ထဲက မြေကြီးကိစ္စဗျ။ တရုတ်တရက်တွေ၊ ဗရုတ်ဗရက်လုပ်နေတဲ့ အရှုပ်အယှက်တွေလို့ သာမန်ကာလျှံကာ မထင်လိုက်နဲ့ဗျ။ အဲဒါလည်း မြေကြီးကိစ္စပဲဗျ။ သယံဇာတ တူးတယ်ဆိုတာ မြေကြီးကိစ္စပဲပေါ့ဗျာ။
အဲ . . . အဲ။ ပြောရဦးမယ်။ ကျုပ်ရင်လေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက အဲဒီ မြေကြီးကိစ္စပဲဗျ။ မြေကြီးပေါ်မှာ လူတွေနေတယ်။ ကျုပ်တို့လို ကျောမွဲတိုင်းပြည်အဖို့က မြေကြီးပေါ်မှာပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသပေါ့ဗျာ။ အဲဂလို လူတွေ မှီတင်းနေထိုင်ရာ မြေကြီး။ လူတွေ တူးဆွအသက်မွေးရာ မြေကြီး။ အဲဒီမြေကြီးတွေဟာ ပြဿနာတွေ ပေါက်ဖွားရာ၊ ပဋိပက္ခတွေ ပေါက်ကွဲရာ အရင်းခံ ဘူမိနက်သန်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် တစ်ပြည်လုံး၊ တစ်မျိုးလုံး အခက်ကြုံ လာနိုင်ပြီလို့ ဆိုရပေမှာပေါ့ဗျာ။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို ပြန်မျှော်ကြည့်မလား။ လတ်တလော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ သတင်းတွေ ငဲ့စောင်းကြည့်မလား။ တိုင်းရေးပြည်ရာ ပြဿနာတွေဟာ မြေကြီးကနေ မီးစွဲတောက်လောင်လာတာဗျ။ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာ အလွယ်နဲ့ သိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်း မြေကြီးတွေ ပူလောင် မြိုက်ကျွမ်းစပြုနေပြီလို့ ဆိုရမယ်ဗျ။
လက်ပံတောင်းလို သယံဇာတတူးဖော်ရေးကိစ္စဟာ မြေယာပြဿနာ ဖြစ်လာနေတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော် အနီးအနား ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်က မြို့ပြနယ်မြေ တိုးချဲ့ရေးကိစ္စဟာ မြေယာပြဿနာ ဖြစ်လာနေတယ်။ ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိစ္စတွေဟာ မြေယာပြဿနာဖြစ်လာနေတယ်။
ဒီလို မြေကြီးကနေ မီးတောက်လာတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ မထိန်းသိမ်းကြ၊ မဖြေရှင်းကြရင် ကြာလေလောင်လေ၊ လူ့ဘောင်မီးစွဲလေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျို့။
၂၀ ရာစုအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မြေကိစ္စတွေက သမိုင်းသက်သေခံနေတယ်။ ၁၉၂၀ ပြည့် ကာလများအတွင်း မြေကြီးပြဿနာဟာ ဆရာစံတောင်သူလယ်သမားသူပုန်ကြီးကို မွေးဖွားပေးခဲ့တယ်။ ဂျပန်ခေတ် လယ်သမားတွေ လယ်မဆင်းနိုင်ဘူး။ မြေကြီးပြဿနာက ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကို ဖန်တီးခဲ့တယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ စတဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ကစပြီး မြေကြီးကိစ္စ ဖြေရှင်းရေးလေသံတွေ ပစ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လို ပြဿနာထုထည်ပမာဏတွေကို စမ်းသပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလေသလဲတော့ မပြောတတ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ မြေကြီးပြဿနာတွေက တက်ပြီးတက်ရင်း ခေါင်ညွန့်ကို နင်းနေကြပြီ။
ကျုပ်တို့ ပြောချင်တာကတော့ဗျာ။ စာရင်းအင်းတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ စီမံလျာထားချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောကိုပြောချင်တာပါ။ သဘာဝကို ပြချင်တာပါ။
မြေကြီးဆိုတာ လှုပ်တတ်သဗျ။ မနှစ်က စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မြေငလျင်ကြီး မှတ်မိရဲ့မဟုတ်လား။
မြေကြီးဆိုတာ ပြိုတတ်သဗျ။ တလောက တရုတ်ပြည်ဘက်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှုကြီးတွေ မြင်မိမှာပေါ့။ ပျက်လိုက်တဲ့အိမ်တွေ၊ သေလိုက်တဲ့လူတွေ။ နည်းမှတ်လို့။
မြေကြီးဆိုတာ မျိုတတ်သဗျ။ ဘုရားလက်ထက် ဒေဝဒတ် မြေမျိုခန်းလို ဖြစ်ရပ်ကအစ ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာနဲ့ အဝန်း ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထစရာ ကြားနေကြရတဲ့ အိမ်တွေ၊ လူတွေ မြေကြီးထဲ နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ မြေမျိုမှုတွေအထိပေါ့လေ။
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ် အသည်းကြောင်ကြောင် ယောင်ကန်းကန်းဟစ်လိုက်ချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ
မြေကြီးတွေ မျိုခါနီးပြီဗျို့။ ။
ဒီလှိုင်းဂျာနယ်။ ။အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၇)။။။ (၆-၅-၁၃)